Cayaaryahanada Soomaaliya oo diyaar garow ku jira
Waxaa Magaalada Palempang ee dalka Indonesia ka furmay 23-sept-2013 Cayaaraha Wadamada Islaamka oo ay ka qeyb galayaan Cayaartoy ka socota dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ka qeyb galaya cayaaraha fudud iyo cayaarta loo yaqaan Teakwondow-ga.
U-qeyb-sanaha GOS ee xiriirka wadamada Carabta iyo Islaamka Cumar C/qaadir Baarajab oo wafdigaan Hogaaminayo, ayaa sheegay in cayaaryahanada Soomaaliya ugu qeyb galeysa Tartanka wadamada Islaamka ay kala cayaari doonaan 28/29/30-sept, iyagoona kala cayaari doona Cayaaraha fudud (orodka) iyo Cayaarta Taekwondow-ga.
Cabdullaahi Barre, oo ku loolami doona orodka 1500M, ayaa cayaari doona Maalinta sabtida 28-sept, dhinaca kale Gabadha Soomaaliya ugu qeyb galeysa Cayaaraha Taekwondow-ga, Saliima Ismaciil, ayaa ku tartami doonta miisaanka 53-kl. Faisal Jeylaani Aweys, ayaa cayaari doona Miisaanka 67-kl. Halka Mohamed Deeq Abdullahi uu cayaari doono miisaanka 63-kl.
Cayaartoydaan ayaa diyaar garow xoogan ku jira, waxa ayna Cayaartoydaan iyo Mas'uuliyiinta la socota ay Magaalada Palempang kula kulmeen, Cayaaryahano iyo Mas'uuliyiin kala gedisan oo magac ku dhex leh isboortiga caalamka, uuna ka mid ahaa Cabdi Bile Cabdi, oo xilligaan macalin ka ah dalka UAE.